Waalidiintii ubadkooda tababarka loogu qaaday Eritrea oo bannanabax ka dhigay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Waalidiintii ubadkooda tababarka loogu qaaday Eritrea oo bannanabax ka dhigay Muqdisho * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By MM on 10th June 2021
Qaar ka mid ah waalidiintii wiilashooda tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ayaa maanta bannaanbax cabasho ah ka dhigay Magaalada Muqdisho.
Waalidiintan ayaa waxay ka cabanayaan inaanay nolol iyo geeri midna ku sheegin ubadkooda, oo Dowladda Federaalka ay tababar ciidan ugu qaaday dalkaasi Eritrea.
Waalaca waalidiinta ayaa waxaa xoojiyay warbixin ay toddobaadkan baahisay Warbaahinta gudaha, ka dib markii Qaramada Midoobey ay sheegtay in ciidan Soomaaliyeed ka qayb qaateen dagaalka Gobolka Tigray.
Waalidiinta ayaa waxay dalbanayaan in dib loogu soo celiyo ubadkooda, haddii ay Dowladda Federaalka ka gaabisay inay la socodsiiyo xaaladooda.
Waalidiinta ayaa laga dhadhansan karay, sida ay kaga careysan yihiin inaanan waxba lagala socodsiin xaaladda ubadkooda.
Sida ay waalidiintu sheegeen maqnaanshaha wiilashooda waxa ay u tirinayaan Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA), Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, bacdamaa Saraakiisha ka amar qaadata ay wiilashooda ku diiwaangeliyeen Xarunta Hay’adda Nabad Suggida ee Habar Khadiijo.
Shalay ayay ahayd, markii Madaxweynihii hore ee dalka, Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in la iibsaday dhalinyaradii Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday Eritrea.